Maraykanka oo diblumaasiyiintiisa kala baxaya Venezuela • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maraykanka oo diblumaasiyiintiisa kala baxaya Venezuela
Maraykanka oo diblumaasiyiintiisa kala baxaya Venezuela
March 12, 2019 - By: Khalid Yusuf
Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka Mike Pompeo
Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay inay dib usoo ceshan doonaan dhamaan diblumaasiyiintii ka joogtay wadanka Venezuela.
Go’aankan ayuu shaaciyey Xoghayaha Arrimaha Dibada ee Maraykanka Mike Pompeo.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 March 2019
Maraykanka ayaa kamid ah dalalkii sheegay inay u aqoonsadeen hogaamiyaha mucaaridka Venezuela inuu yahay Madaxweyne kumeel gaar ah, waxayna cadaadis xoogleh saareen Madaxweynaha xilka haya ee Nicolas Maduro.
Madaxweyne Maduro oo qaadacay baaqa Maraykanka iyo xulafadiisa ee doonaya inuu xilka ka dego ayaa sheegay inay yihiin dal madax banaan oo aan u joojin doonin farogelinta shisheeye. Nicolas Maduro ayaa sidoo kale sheegay inay iska difaaci doonaan qorshe walba oo uu doonayo Maraykanka inuu ku khal khal geliyo dalkooda.
Ka bixitaanka Diblumaasiyiinta Maraykanka ayaa muujineysa in Maraykanka ku fashilay cadaadiskii ay saareen Maduro iyo kacdoonkii ay doonyeen in Mucaaridka xukunka kula wareego.
Shirkadaha laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa ah kuwo si weyn u daneenaya inay dib ulla wareegaan soo saarista Saliida uu qaniga ku yahay dalkaasi, shirkadahaasi oo uu horey wadankaasi uga saaray Madaxweynihii uu Maduro xilka kala wareegay ee Hugo Chaves.
Wadanka Maraykanka ayaa cunaqabateyn dhaqaale ku hayey dalka Venezuela sanadihii lasoo dhaafay, wuxuuna dar dargeliyey cadaadiskaasi dhamaadkii sanadkii tagay kadib markii ay doorashada dalkaasi ku guuleysteen xisbi xaakimka Maduro oo ay taageeraan inta badan shacabka saboolka ah ee dalkaasi.
Tujaarta iyo Dabaqada dhexe ee dalka Venezuela ayaa intooda badan taageera mucaaridka Venezuela oo ku fashilay inay doorashada uga guuleystaan xulafada Maduro, balse doonaya in xilka laga qaado Madaxweynaha kadibna ay iyagu soo diyaariyaan doorasho cusub.
Farogelinta Maraykanka ee ugu danbeysay ayaa ahayd deeq raashin ah oo ay asbuucyadii lasoo dhaafay u direen dalka Venezuela, deeqdaasi oo la geeyey dalalka jaarka la ah Venezuela ee Colombia iyo Brazil ayaa la doonayey in mucaaridka xoog kusoo gesho duha dalkaasi ayaa lagu guuleysan waayey.
Maduro ayaa sheegay in dalkiisa uusan mucaawino uga baahneyn Maraykanka ee balse doonayaan in laga qaado cunqabateynta wuxuuna sidoo kale sheegay in mucaawinada Maraykanka ee lasoo mariyey dalalka xulafada la ah mucaaridka la doonayey in lagu hoos qariyo hub si sharci daro ah dalkiisa loo keenayey.
Nayjeeria: Qofkii iibiya ama Isticmaala Bac waa saddex Sanno oo Xarig ah
Shirkadda Huawei oo dharbaaxo culus uga timid shirkadaha waaweyn ee Maraykanka
Sacuudiga iyo Imaaraatiga oo ogolaaday in ciidamo Maraykan ah dalalkooda la keeno
Israel oo gantaalo ku tuurtay Dimishiq, Siiriya
Puntland iyo Galmudug oo Wadajir Uga Horyimid Sharciyada Batroolka iyo Doorashooyinka Federaalka
Khayre oo Ka Taciyeeyay Wasiir Ku Dhintay Qarixii Muqdisho
DF oo Jawaab Ka Bixisay Go’aankii Kenya Fiisaha Ugu Diiday Madaxda Soomaalida